Vaovao - Lehibe ny mety amin'ny famokarana: mihoatra ny 90% amin'ny fanondranana dia entana vita
Avy amin'ny indostrian'ny indostria mahantra ka hatramin'ny rafitra maoderina feno, manomboka amin'ny famokarana afokasoka sy savony fotsiny ka hatramin'ny fiara handeha any ivelany, manomboka amin'ny teknolojia manaraka ny fanavaozana mitovitovy amin'ny teknolojia mitarika fanavaozana mahaleo tena… angon-drakitra momba ny toekarena indostrian'i Shina, ny sarin'ny fivoaran'ny leapfrog dia mivelatra tsikelikely.
Ny tena toekarena no hery mitarika ny fampandrosoana ara-toekarena. Tokony hanohy ny fanavaozana ny indostria isika ary hampiakatra ny haavon'ny famokarana. Mijoro ao amin'ny rafitra fandrindrana ara-tantara nandritra ny 70 taona nisian'ny fampandrosoana ara-toekarena indostrialy miandrandra, ahoana no ahafahan'ny indostrian'i Shina hahatratra zava-bita miavaka? Inona koa no fepetra hafa tokony horaisina mba hametrahana fototra mafy orina? Nanadihady ireo manam-pahaizana momba ny indostria ny mpanao gazety. Ny tombontsoan'ny andrim-panjakana sy ny fanavaozana ary ny fisokafana miaraka dia miteraka fahagagana amin'ny fampandrosoana.
Tamin'ny 1952, nahatratra 12 lavitrisa yuan ny tombam-bidin'ny indostria; tamin'ny 1978, nihoatra ny 160 lavitrisa yuan izany; tamin'ny 2012, nandany 20 trillion yuan; ary tamin'ny taona 2018 dia nihoatra ny 30 trillion yuan izany. Raha manao tabilao andalana momba ny sanda fanampiny indostrialy isika tato anatin'ny 70 taona lasa, dia hita eo amin'ny taratasy ny fiolahana miakatra sy mihodinkodina.
Nanomboka tamin'ny 1952 ka hatramin'ny 2018, amin'ny vidiny tsy tapaka, dia nitombo in-970,6 heny ny sandan'ny indostria, na 11 isan-jato ny tahan'ny fitomboana isan-taona. "Tsy mihoatra ny an'ny ankamaroan'ny firenena an-dalam-pandrosoana amin'ny vanim-potoana mitovy ihany io tahan'ny io, fa mihoatra ny faharetan'ny fitomboana any amin'ny ankamaroan'ny firenena mandroso amin'ny vanim-potoana mitovy." China macro-economic research institute indostrian'ny efitrano ny talen'ny pay Bao zong hoy.
Mitombo hatrany ny sehatra indostrialy. "Tamin'ny andro voalohan'ny nananganana ny Repoblika Entim-bahoakan'i Shina, niantehitra tamin'ny tombontsoa ara-panjakana amin'ny fifantohana ny loharanon-karena mba hanatanterahana asa lehibe, dia nifantoka tamin'ny sehatry ny indostria mavesatra ny loharanonay, ary ny vokatra azo avy amin'ny indostria lehibe toy ny solika sy ny solika. Nitombo haingana ny famokarana herinaratra.” Li Jiangtao, talen'ny fampianarana sy fikarohana ara-toekarena indostrialy ao amin'ny departemantan'ny toekarena ao amin'ny Sekolin'ny Antoko ao amin'ny Komitin'ny Foiben'ny CPC, dia mihevitra fa nametraka fototra ara-teknolojia matanjaka ho an'ny fanavaozana izany.
Fotoana fandefasana: Jun-20-2021